China Clothing Security M 58KHz Tags Mkpu Mkpu-Obere Pensụl Kpado ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | Etagtron
Uwe mkpuchi AM 58KHz Tags Mkpu Mkpu Mkpu-Obere Pensụl Tag
Ndị na-abụghị ndị deactivatable, reusable Non-nyagide Hard Tag na-anapụta elu arụmọrụ AM EAS teknụzụ na obere ike mkpado imewe. Fchọta a oge a, imeri na-eguzogide imewe na mfe ngwa / mwepụ na ebe-nke-ire, a ferrite mkpado bụ Ezigbo maka ichedo ọtụtụ ụdị ahịa.
Nọmba Model: Obere Pensụl Mkpịsị (Mba .001 / AM)
Pịnye: AM Tag
Akụkụ: 45 * 19 * 14MM (1.77 "* 0.75" * 0.55 ")
Agba: Agba ntụ / Ọcha / Nwa
AM Pensụl Ike Tag Clothing Security Mkpu ihe mmetụta
Na-ebelata ire ahịa furu efu ma na-ewepụ ọnụ ahịa ọrụ metụtara ịkọ ihe n'ụlọ ahịa, na-enye ndị mmekọ ụlọ ahịa ohere ijere ndị ahịa ozi nke ọma
Ihe eji eme otutu ihe na-echekwa ngwongwo siri ike, ngwongwo di nro na ihe nile di n’etiti
③Mfe ngwa na mwepụ iji nyere aka melite arụmọrụ ụlọ ahịa
EAS AM Ike Tag
0.5-2.5m (depneds na sistem & enviornment na saịtị)
Isi nkọwa nke AM siri ike mkpado-Obere pensụl mkpado:
1.Very Obere Pensụl ekara imewe.
2.Super-mkpọchi Security Tag nwere ike etinyere a dịgasị iche iche nke uwe, na-ebelata mmetụta na ọbụna ndị kasị siri uwe.
3.Defeat eguzogide imewe. A isiike ABS plastic ụlọ jikọtara na a ibu-mkpọchi atụmatụ pụtara naanị ike ụdị detitors ga-emeghe a na mkpado.
4.This a otutu mkpado bụ ihe kasị mma na-ere ákwà. Dị mfe, nwee uche ma dịkwa oke irè. Ihe pụrụ iche Moké na-eweta ọnụ a pensụl nche mkpado na lanyard n'ime otu kemgwucha bara uru ngwaahịa. Zuru oke maka ụdị ngwa ọ bụla, gụnyere akpụkpọ ụkwụ na akpa.
5.The Pencil mkpado bụ ngwa na mfe iji. Maka usoro ụzọ ọpụpụ / ụzọ ọpụpụ ọ bụla na kwa mpaghara EAS ọ bụla.
Elu àgwà ABS + High uche ferrite + Iron kọlụm mkpọchi
Mgbe obibi ebi bụ isi awọ, nwa, ọcha na ndị ọzọ na agba, na logo nwere ike hazie
Deactivate tag na na AM 58KHz detacher.
♦Mkpado siri ike na-egbochi ohi siri ike nwere ọrụ mkpu siri ike, enwere ike ịgbakwunye ya na ngwaahịa ahụ, ma nwee ndụ ọrụ ogologo. Mkpado siri ike na-adịgide adịgide nke ukwuu ma nwee ike ịmaliteghachi maka iji ya eme ihe ugboro ugboro. A na-ejikarị ha eme ihe dị iche iche dị ka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa akwa, ụlọ ahịa ngwá ọrụ, wdg. Enwere ike iji ha na ngwugwu mmiri na ngwongwo ígwè, na-ebelata nkwụsị nke ohi, na-abawanye uru ụlọ ahịa, na imeziwanye ịzụ ahịa ahụ.
♦Mkpado mgbochi ohi Pencil Obere bụ ezigbo ihe dị n’etiti site na Pencil na Pencil Super iji kpuchido ihe sitere na ihe dị arọ na uwe dị nro. Igosipụta ọgbara ọhụrụ, mmeri na-eguzogide ọgwụ na ngwa / mwepụ dị mfe na ire ere, mkpado a na-arụ ọrụ na Etagtron yana sistemụ AM 58Khz ndị ọzọ niile, Mkpado Elektrọnik Nkeji Elektrọnik (EAS) dị mma maka ichedo ụdị ahịa dị iche iche. iji gbochie ntụtụaka. Ezubere ya maka usoro AM 58KHz niile.
Nke gara aga: Security Tag Label Deactivator N'ihi AM 58Khz EAS AM Label-CT580
Clothing Security AM 58KHz Tags Mkpu sensọ H ...
EAS Cheap Clothing AM Anti-Izu Digital Epaper ...
Uwe Store EAS System Anti-ezu ohi Magnetik S ...